Dowladda Soomaaliya Oo Dhaqaale Siineysa Qoysaska Puntland Uu Saameeyay Ayaxu - Horseed Media • Somali News
Dowladda Soomaaliya Oo Dhaqaale Siineysa Qoysaska Puntland Uu Saameeyay Ayaxu
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Duraan Axmed Faarax oo socdaal ku jooga Puntland, ayaa booqday deegaannada uu saameynta ka geystay Ayaxa ee gobolka Nugaal.
“Waxaan u nimid halkan si aan u oggaano sida ay ku socoto diiwaangelinta Qoysaska uu saameeyay Ayaxa ee beeralayda ah,kuwaaso qeyb ka ah Qoysas ay Dawladdu taageerro dhaqaale oo soo kabasho ah siin doonto” ayuu yiri Wasiir Duraan oo warbaahinta kula hadlay deegaanka Jibagale ee hoos taga magaalada Garoowe.
Duraan Axmed Faarax, wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Soomaaliya ayaa xaqiijiyay inay Dawladda ka go’antahay sidii dhaqso looga jawaabi lahaa xaaladaha deg degga ah oo uu ka mid yahay Ayaxa saameeyay beeralay badan.
Qoysaska uu saameeyay Ayaxa ee ku nool in ka badan 40 degmo oo dalka oo dhan ah, ayaa lacag caddaan ah muddo lix bil ah ka heli doono mashruuca ka jawaabaya saameynta Ayaxa ee Baxnaano oo qeyb ka ah siyaasadda ilaalinta Bulshada ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
“ Mashruucan waxaan u daba galeyna si uu guul ugu dhammaan lahaa xilliga loogu talagalay,cidda ku habboona ay uga faa’iideysan lahayd, waa arrin suragalinaysa taageerro ballaaran inay helaan dadkeenna nugul iyo kuwa xaaladaha deg degga ay soo food-saaraan” ayuu ku daray.
Booqashadan waxaa wasiirka ku wehelisay wasiir ku xigeenka Wasaaradda Shaqada,Shaqaalaha,Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Puntland, Hodan Siciid ,madaxa Barnaamijka Baxnaano, Fardowsa Axmed Cabdullaahi iyo mas’uuliyiin kale.